Adobe wuxuu soo saaraa Photoshop Camera on Android iyo iOS | Abuurista khadka tooska ah
Adobe ayaa sii deysay Photoshop Camera si ay u Android iyo macruufka
Waxaan sugaynay nooca ugu dambeeya ee Adobe Photoshop Camera maadaama aan fursad u helnay inaan tijaabino beta. App loogu talagalay dib-u-hagaajinta oo adeegsanaya Adobe Sensei, tiknoolajiyadda 'Artificial Intelligence' ee Adobe iyo taas oo ku guuleysata natiijooyin aad u fiican dhammaan noocyada sawirrada.
Maalintan Adobe ayaa barnaamijkan ku daabacday labada barnaamij ee Android iyo iOS, sidaa darteed adeegsadayaashu waxay ku hayaan gacantooda barnaamij weyn oo bilaash ah si ay u iftiimiyaan sawirada ay ku qaadaan mobiladooda. Nooca 1.0 waxaa lagu sii daayay saameyn cusub si tayo ahaan loo hagaajiyo sawirrada aan ku qaadno mobiladayada.
Kaamiradda Adobe Photoshop waxay isticmaashaa ilaha maxalliga ah ee mobilkayaga, sidaas waxaad u baahan tahay taleefan casri ah oo wanaagsan si aad "u tuurto", maxaa yeelay hadaanay ahayn wax qabadku sifiican uma noqon karo. Dhab ahaan in noocyadii ugu horreeyayXitaa heer sare sida Samsung's Note10 +, uma socon sidii la rabay.
Haa, nooca 1.0 horeyba waxaan leenahay heerkaas ugu fiican inaad si buuxda ugu raaxeysato saameynteeda kala duwan. By the way, in yar oo cusub ayaa soo socota si aan 'dib ugu hagaajin karno' sawiradaas oo aad u bogaadin doona markaan u gudbinno shabakadaha bulshada iyo barnaamijyada fariimaha.
Hadafka Adobe waa inuu ku rito gacanta dhammaan noocyada horumariya, in kasta oo ay run tahay taas kuwa soo geliya waxyaabo tayo sare leh Waxay noqon doontaa aalad muhiim ah, barnaamij si tayo leh loogu hagaajiyo sawirradaada. Runtuna waxay tahay inaan dhihi karno waa barnaamijka ugu fiican ee miirayaasha. Hadda waxay u sii jirtaa naqshadeeyayaasha badan inay ku soo biiraan abuurista miirayaasha Adobe Sensei's Sirdoonka Cilmiga ah waxayna siin kartaa dadka isticmaala tiro badan oo miirayaal ah si kor loogu qaado sawirradooda shabakadaha.
Imaatin dhan oo ah Kaamirada Adobe Photoshop iyo inaad horeyba uga heli jirtay labada barnaamij ee Android iyo iOS dukaankooda waxay ka sameeyaan ereyo kooban oo isku xidhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Adobe ayaa sii deysay Photoshop Camera si ay u Android iyo macruufka
Sida loo nadiifiyo sawir gacmeed sawir leh Photoshop
10 filim iyo taxane ay ka buuxaan hal-abuur aanad seegi karin